देउवा भन्दा ओली एक कदम अघि, देउवा नपुग्दै ओलीले राष्ट्रपतिलाइ शीतलनिवासमा भेटेर दिए यस्तो पत्र – Sapana Sanjal
देउवा भन्दा ओली एक कदम अघि, देउवा नपुग्दै ओलीले राष्ट्रपतिलाइ शीतलनिवासमा भेटेर दिए यस्तो पत्र
May 21, 2021 340
प्रधानमन्त्री दावी गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको दावी सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा शीतल निवास पुग्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवासमा पुगीसकेका थिए । ओली देउवा भन्दा पहिले नै शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । उनले एकालेको १२१ र जसपाका १७ सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास पुगेको बताइएको छ ।
नेकपा एमालेको १२१ सांसद छन् । तर माधव नेपाल पक्षका २७ सांसद ओली इतरको गठबन्धनमा लागेका छन् । उनीहरुले यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका थिए । शीतल निवासमा ओली र देउवाको जम्काभेट भएको छ । ओली विपक्षी दलहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दावीसहित शीतलनिवास पुग्नुअघि नै पुगेका कारण यतिबेला उनी शीतल निवास भित्र भएका कारण देउवाहरु समय कुरेर केही बेर बाहिर बसेका थिए ।
यसअघि बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले आफूले पनि सरकारका लागि दावी पेस गर्ने बताएका थिए। उनले आफुसंग १२१ सांसद रहेको बताउँदै दावी पेश गर्ने जानकारी गराएका थिए । संसद जोगाउनकै लागि भएपनि आफुलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने ओलीको तर्क थियो । ओली शीतल निवासवाट वाहिरिएपछि देउवा समुह भित्र प्रवेश गरेको हो ।
Prev१४९ जनाको हस्ताक्षर बोकेर प्रधानमन्त्री दावी गर्न देउवा शीतल निवास नपुग्दै हस्ताक्षर नक्कली भएको पुष्टी भएपछि….
Nextविपक्षीले छलफल गर्दै गर्दा ओली र ठाकुरबीच भैसक्यो नयाँ सहमति: महतोको नेतृत्वमा ८ मन्त्रालयसहित जसपा सरकारमा जाने !
अब ४० वर्ष उमेर काटेका एकल पुरुषलाई पनि भत्ता !